एनआरएनए युकेद्वारा अन्तर्क्रिया
अल्डरसट । एनआरएनए युकेले गत शनिबार साँझ एमाले केन्द्रीय नेताहरु डा. विजय पौडेल, डा. रमेश पौडेल र हङकङबाट आएका एनआरएनए आईसीसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङसँग अन्तत्र्रिmया गरेको छ ।
अन्तर्क्रियामा अर्थविद् समेत रहेका नेता पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषयमा बोल्दै भइरहेको नेपाली नागरिकतालाई नै निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको लगानीको संभावना बढी भएको बताउँदै आफूले सिकेको सीप, क्षमता र लगानी नेपालमा भित्र्याउन अनुरोध गरे ।
त्यस्तै, एनआरएनए आईसीसी सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विकट लाप्राक गाउँमा निर्माण भइरहेको भवनको डिबिसी लेबलसम्मको काम पूरा भएको जानकारी दिए । उनले एनआरएनए युकेको नेपाल हाउस अभियान सहयोगार्थ १ लाख सहयोग रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्दै नेपालमा निर्माणधीन एनआरएनए बिल्डीङ्गको बारेमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा डा. रमेश पौडेलले आफू १० वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा बसेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरुको समस्याबारे जानकार रहेको बताए ।
तमुधिं युकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङलगायत पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा एनआरएनए युरोप संयोजक कुल आचार्य, पूर्वअध्यक्ष सूर्य गुरुङ, योगेन क्षेत्री, डा. हेमराज शर्मालगायत एनआरएनए अग्रजहरुको विशेष उपस्थिति थियो । एनआरएनए युकेको अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकलाई महासचिव विजयबिक्रम लिङ्देनले सञ्चालन गरेका थिए ।